Mazano Anobatsira Kubva Semalt On Nzira Yokudzivirira Mairi Asingadikanwi PaAkaunti yako yeGmail
Kugamuchira tsamba dzisingadadi uye dzisina kukanganisa kubva ku-akhawunti yako yeGmail zvinogona kunge zvichitsamwisa. Gmail yakaisa mberi mafikisi anobudirira ekudzivirira spam emails kubva kumatsotsi ekunyora mazita uye vamwe vanotumira. Kana iwe wakanga uchigamuchira spam emails, Gmail inoita kuti zvive nyore kwauri kuti uvhare mairi asina kukodzera nguva dzose.
Ross Barber, iyo Semalt nyanzvi, inoti mumakore akapfuura, vasikana nevashamisi vakashandisa ma-email mazita kuti vape mashoko kubva kumakombiyuta ekupedzisira-user - gestionnaire de projet libre. Kana iwe ukanyorera email inonyangadza pane account yako ye Gmail, unogona kuendeswa kune webhusaiti yehutsva apo vanokuvadza vanogona kukurumidza kuwana ruzivo rwemari nemapepwords. Mukufamba kwenguva, va spammers vanoita mari chaiyo inobhadharwa kwavari nemasangano semari yekudhinda. Maail asina kufanira haafaniri kunge ari dambudziko guru rinoshandisa purogiramu yako yepaIndaneti kana kushanda. Rega mazita e-mail ave kungovhiringidza zvishoma nokuderedza nhamba ye emaimeri asina kudiwa anotumirwa ku-akhawunti yako.
Nzira yekudzivirira sei vashandisi venyaya yako yeGmail vachishandisa zvinyorwa zvepa spam
Kana zvasvika pakudzivirira spam emails kubva ku Gmail account, kushandisa zvinyorwa zvepa spam zvinofanira kuva iwe sarudzo yako yekutanga yekufunga. Tsvina yepa spam inonyanya kuziva kuti akawanda emaizai enyu asina kudiwa anobva kupi, inyanzvi yezvinyorwa zvemashoko asina kukanganisa, mahofisi akavharwa ne email, uye nhamba yevanhu vanogamuchira maimeri asina kukumbirwa.
Kuvhara mishumo inonyangadza uye isina kukanganisa inobva kune vamwe vatumwa kubva pakuenda kuGmail account yako, ingowedzera vatumira ku Gmail yako mazita. 'yakaratidzwa pakona yepamusoro-yakarurama ye email inonyengera.
Sarudza kuburikidza nekusarudzwa kwekutsvaga mushure mekutarisa pasi pasi, uye bhura 'Block Sender' sarudzo. Mune ramangwana, maimeri ose asina kudiwa kubva kumudzidzi akavharidzirwa anotumirwa ku "junk" folder. Nenguva isipi, Gmail inokupa mukana wekuvhara vatumeri vakanzwika pangozi.
Tsanangudzo dzokuti ungaudza sei spam emails
Paunowana email spam munhoroondo yako ye Gmail, haufaniri kutya. Kushandura chekucherechedza chiri mumatsetse eemail kana kushandiswa kunopa mhinduro yakanakisisa. Google inoshandisa mishumo yakaiswa nevashandisi vekupedzisira kugadzirisa firamu ye spam uye inoita kuti ive nani. Spam filters inounza mhinduro dzakanakisisa. Zvisinei, mamwe mabhuku asina basa nguva dzose anowana nzira yokupfuura nayo kuGmail account yako. Kuti uone ma-emails asina kuwanikwa akagashira ku-akhawunti yako, chengetera 'pasi pasi' yakaratidzwa nepamusoro-kurudyi kwemajeri asina kuwanikwa akagamuchira.
Tsvaga pasi pane zvakasarudzwa zvinoshandiswa pasi pemusara pasi uye bhura 'Bika spam' sarudzo. Mushure mekucherechedza kana kutumira mameseji uye emaimeri, zvinyorwa zvisingabatsiri zvinotumirwa kune 'faira.' Ramba uchivhara uye udzore maimeri asina kudiwa kuGmail uye kuderedza nhamba yejekisi mafaira akatumwa kwauri nevatambi nevashamisi.
Gmail inotora kuchengetedza kweGmail account yako zvakanyanya. Usarega bhokisi rako rekuvhara rakaputika nemafuta asina kuwanikwa uye maaimusi asina kudiwa. Dzivisa kugamuchira zvinyorwa zvemashoko kubva kune vamwe vanotumira nekuwedzera kwavari kubhuku rako rekuvimba. Kuregedza vatumwa vanobatana newe block block randingangodaro vanogona kuitwa nekunyanya 'pasi pasi' uye nekunyanya 'kusvinura' sarudzo.